सेसर हरदा: म कसरी केटाकेटीहरुलाई बिज्ञानप्रतिको मोह जगाउछु - English-Video.net
म सानो हुँदा, बा आमाले भन्नुहुन्थ्यो -
"तिमीहरु लथालिंग त पार्न पाउछौ,
तर पछि आफैंले सफा गर्नुपर्छ " ।
स्वतन्त्रता उत्तरदायीत्व संगै आउंथ्यो ।
म भने कल्पनाको संसारमा ती आश्चर्यजनक
जहाँ जे पनि सम्भव थियो ।
यसरी, म सरलताको संसारमा हुर्कें ----
अथवा भनौं, अज्ञानताको अन्धकारमा हुर्कें,
किनकि, तितो सत्य देखि रक्षागर्न
हाम्रा अग्रजहरु झुठो बोल्नुहुन्थ्यो ।
हुर्कदै जाँदा मैंले बुझें, ठुलाहरू
पनि भद्रगोल गर्छन,
उनीहरुपनि आफुले गरेको भद्रगोल
राम्ररी सफा गर्दैनन् ।
अब म बयस्क भइसकें र अहिले
हङकङ हार्बर स्कूलमा नागरिक विज्ञान
र आविष्कार बिषय सिकाउछु ।
समुद्रको किनारमा दौडिन र फोहोरको थुप्रोमा
ठोक्किन कत्तिपनि बेर लाग्दैन ।
एउटा असल नागरिक बनेर, हामी
सामुद्रिक किनार सफा गर्छौं,
उसले मदिरा पिउंदै गरेको होइन, भएपनि
म उसलाई कहाँ दिन्छु र!
दु:खका साथ भन्नुपर्दा,
अहिले समुद्रहरुमा ८०% भन्दा बढी
प्लास्टिक मिसिएको छ ।
यो डरलाग्दो सत्य हो ।
ठुला पानीजहाजमा ठुला ठुला जालीहरू थापेर
प्लास्टिकका टुक्राहरु संकल गरेर
हामी तिनलाई छुट्याउथ्यौं,
र ती डाटा नक्सामा प्रस्तुत गर्थ्यौं ।
तर त्यो काम कहिल्यै नसकिने, खर्चिलो,
र जहाजको कारणले खतरापूर्ण पनि थिए।
त्यसैले ६ देखि १५ बर्ष भित्रका
अनुसन्धान गर्ने सजिलो तरिकाको
खोजी गर्दैछौं ।
यसैको लागि, हामीले सानो कक्षा कोठालाई
प्रयोगशाला बनाएका छौं ।
हामीले काम गर्ने टेबल बनाउन थाल्यौं ,
जून, होचा केटाकेटीहरुले समेत काम गर्न
मिल्ने विभिन्न उचाईको थियो ।
हातमा बिभिन्न उपकरण बोकेका केटाकेटीहरु
आकर्षक अनि सुरक्षित देखिन्छन, हैन त ?
खासमा चैं होइन ।
प्रसंग फेरी प्लास्टिककै,
हामी यी प्लास्टिक जम्मा गर्छौं र पिंधेर
समुद्रमा भेटिने जत्रै आकारको
बनाऊछौं, जून अत्तिनै सानो हुन्छ ।
हामी यसैगरी काम गर्छौं ।
म केटाकेटीहरुलाई कल्पनाको
संसारमा छोडीदिन्छु ।
मेरो काम, प्रत्येक केटाकेटीहरुको
राम्रो कल्पना टिप्ने
र ती सबैलाई जम्मा गरेर काम गर्न सकिने
एउटा बिचारमा रुपान्तरण गर्नु हो ।
अहिले हामीले प्लास्टिक जम्मा गर्नुको सट्टा
डाटाहरु जम्मा गर्ने योजना गरेका छौं ।
हामी रोबोटबाट प्लास्टिकको प्रतिलिपि
बनाउदै छौं ---
रोबोट भनेपछि, केटाकेटी दंग पर्छन ।
हामीले गर्ने दोश्रो काम हो -
तिब्र प्रतिलिपिकरण ।
प्रतिलिपिकरण गर्न हामी
यति तिब्र छौं, खाजा खानपनि बिर्सिन्छौँ ।
हामी टेबल र वेबक्याम बिगारेर
प्लम्बिङ्गमा फिट गर्दिन्छौं ।
ती सबै सामग्री लगेर पानीमा तैरिरहेको
रोबोटमा जोडजाड पर्छौं
र हामीले जम्मा गरेको प्लास्टिकहुँदै
अगाडी बढाऊछौं र यस्तो प्रतिलिपि बनाऊछौं
हामी सेन्सरमा प्लास्टिकका टुक्राहरू
बिस्तारै तैरीरहेको देख्न सक्छौं,
त्यहाँ रहेको कम्प्युटरले
प्रतिलिपि बनाउन थाल्छ,
प्रत्येक टुक्राहरुको आकार नाप्छ,
जसको आधारमा हामी, पानीमा कति प्लास्टिक छ
भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौँ ।
हामीले यस प्रबिधिको प्रत्येक तहको
राम्ररी टिपोट बनायौं
र अविस्कारकहरुको वेबसाइटमा राख्यौं,
हामीलाई बिश्वास छ अरु कसैले यसलाइ
अझ राम्रो बनाउनेछन् ।
यो प्रोजेक्टको राम्रो पक्ष - बिद्यार्थीले
स्थानीय समस्याहरु देख्नु,
र देख्नासाथ समाधानको उपाय
खोज्न थाल्नु हो ।
(स्थानीय समस्या आफैं अनुसन्धान गर्न सक्छु)
हंगकंगका मेरा बिद्यार्थीहरु
निकै जिज्ञाशु छन् ।
उनीहरु TV, Internet हेर्छन्
र नयाँ विचार लिएर आऊछन् ।
लगभग १० बर्षको यो बच्चा नाङ्गो हातले
पोखिएको तेल सफागर्दै छ-
बंगलादेशको सुन्दर बनमा, जुन मानब निर्मित
संसारकै सबै बन्द ठुलो जंगल हो ।
यो देख्दा उनीहरु आश्चर्यचकित परेका थिए,
किनकि यहि पानी, उनीहरुले पिउने, नुहाउने
माछा मार्ने र यहि सेरोफेरोमा
बस्ने गरेका थिए ।
तपाईंदेख्न सक्नुहुन्छ- पानी खैरो छ,
माटो र तेल पनि खैरो छ,
सबैकुरा एकै ठाउंमा घुलमिल हुँदा
पानीमा के छ, देख्न सकिन्न ।
एउटा साधारण प्रबिधि छ-
यसबाट हामी पानीमा के छ, देख्न सक्छौं ।
त्यसैले हामीले स्पेक्ट्रोमीटरको
प्रतिलिपि बनायौं ।
बिभिन्न पदार्थहरुबाट आएको उज्यालोले,
बिभिन्न स्पेक्ट्रम बनाउछ,
जसले पानीमा के छ, थाहा पाउन सहयोग गर्छ ।
हामीले यस्तै सेन्सरको प्रतिलिपिहरु बनायौं,
र बंगलादेश पठायौं ।
यो प्रोजेक्टको रमाइलो पक्ष,
स्थानीय समस्याहरुलाइ सम्बोधन गर्नु, वा
स्थानीय समस्या हेर्नुको साथै,
मेरा बिद्यार्थीहरुले स्थानीय
केटाकेटीहरुको अवस्था महसुस गरेर ,
आफ्नो सिर्जनात्मकताको प्रयोग गर्न सके ।
(म टाढाको समस्या पत्तालगाउन सक्छु)
दोस्रो अनुसन्धानबाट म
अत्यन्त उत्साहित भएर
अझ गहिरो अनुसन्धान गर्ने बिचारमा पुगें--
अझ कठिन कठिन समस्याहरु पत्ता लगाउने ।
म आधा जापानी र आधा फ्रेन्च हुँ ।
तपाईंहरुलाई याद पनि होला, जापानमा
सन् २०११ गएको भुकम्प ।
त्यो यति खतरनाक थियो कि, त्यसले
बिशाल छालहरु उत्पन्न गर्यो -
जसलाई सुनामी भनिन्छ --
त्यस सुनामीले जापानका धेरै शहरहरु
र पुर्बी तट ध्वस्त बनायो ।
त्यस घटनामा १४००० भन्दा बढी
मानिसको ज्यान गयो ।
साथै फुकिसिमा प्रान्तको आणविक भट्टी समेत
केवल पानीले क्षति पुर्यायो ।
अहिलेको प्रतिबेदन अनुसार
लगभग ३०० टन जस्तो
आणविक भट्टी बाट प्रशान्त महासागरमा
चुहावट छ ।
अहिले पुरा प्रशान्त महासागर
सेसियम -१३७ द्वारा प्रदुषित छ ।
पश्चिमी तटतिर गएर हेर्ने हो भने,
त्यसको असर जता ततै देख्न सकिन्छ ।
नक्सामा हेर्दा, एस्तो लाग्छ,
सबै रेडियो तरंग
जापानी तटबाट पखालिएका छन् ,
र हेर्दा लाग्छ पानी नीलो र सुरक्षित छ ।
तर बास्तबिकता यो भन्दा जटिल छ ।
त्यो दुखद घटना पश्चात म हरेक बर्ष
म स्वतन्त्र रुपमा तथा अन्य
जमिन एवं नदीमा प्रभाव नाप्ने गर्छु--
यो पटक मैंले बिद्यार्थीहरुपनि लिएर
जाने विचार गरेको थिएँ
नि:सन्देह अविभावकहरुले अनुमति
दिएनन् र हामीले लगेनौं ।
हरेक रात हामी फरक मुखुण्डो लगाउने
"मिसन कन्ट्रोल" संग सम्पर्क गर्थ्यौं ।
यस्सो हेर्दा, उनीहरुले त्यति ध्यान दिएका
जस्तो नदेखिए पनि, ध्यान दिन्थे ।
किनकि उनीहरुलाई पुरै जीवन
Radioactivity संग बिताउनु छ ।
हरेक दिन संकलन भएका डाटाहरुको
जानुपर्ने अर्को स्थानको बारेमा
भावी रणनीति तयार गर्थ्यौं . ...आदि ।
यो कार्यको लागी, हामीले एउटा साधारण
Topographical Map बनायौं
जुन, आणबिक भट्टी वरिपरिको थियो ।
नक्सामा अग्लो होचो बनायौं ।
Radioactivity जस्तै देखाउन
रंग स्प्रे गर्यौं,
पानी छर्केर वर्षा भएको देखायौं ।
यसबाट हामी देख्न सक्थ्यौं कि,
पहाडहरुबाट पखालिंदै खोला तर्फ जाँदै थिए
र बिस्तारै समुद्रमा मिल्दै थिए ।
यो सम्भावित अनुमान मात्रै हो ।
यहि कुरा दिमागमा राखेर हामीले
एउटा अभियान चलायौं,
यसकालागी हामीले आणविक भट्टी नजिकका
बासिन्दासँग सम्पर्क गर्यौं ।
हामी आणविक भट्टी भन्दा १.५ कि.मि. टाढा छौं
र हामीलाई सहयोग गर्दैछन स्थानीय माझीहरु ,
हामी समुद्रमा थिग्रिएको
लेदो संकलन गर्दैछौं,
हामी आफैले आविस्कार गरेर बनाएको
नमुना संकलन यन्त्रको मद्धतले ।
हामी यी लेदोहरुलाई सानो सानो
ब्यागमा पोको पार्छौं,
सयौंको संख्यामा यस्ता ब्यागहरु तयार गरेर
विभिन्न यूनिवर्सिटीमा पठाऊछौं ,
र सामुद्रिक पिंधको Radioactivity को
बिषेसगरि माछाले प्रजनन गर्ने मुहानहरुमा ,
अनि आशा राख्छौं, केहि सुधार भएको छ-
स्थानीय माझीहरु र उनीहरुको प्यारो
खाना - सुशीको ।
यहाँ केहि प्रगति देख्न सकिन्छ --
हामी स्थानीय समस्याबाट टाढाको हुदै
संसारकै समस्या हेर्न थालेका छौं ।
साधारण र सर्वसुलभ
प्रबिधिद्वारा काम गर्न रमाइलो छ ।
कहिलेकहीं अत्याश पनि लाग्छ,
हामी केवल हामीले बिगारेको कुरा
मात्रै नाप्दै छौं ।
समस्या समाधानको बिषयमा केहि थालेको छैन ।
कहिले कहीं मनमा लाग्छ, हामीले
ठुलो फड्को मारेर
यी कामहरु गर्न अझराम्रो तरिकाको
आविस्कार गर्न सके !!
यो सोचाई संग संगै, हामीलाई यो
कक्षा कोठा सानो लाग्न थाल्यो ।
हामीले हंगकंगमा एउटा
औद्योगिक क्षेत्र भेट्यौं ।
र यसलाई हामीले बिशाल कार्यशाला बनायौं
र हामीले वातावरणीय प्रभाबलाइ
बिशेष ध्यानमा राख्यौं ।
हंगकंगको केन्द्रमा रहेको
यो स्थानमा हामी काठ, फलाम, रसायन
अलि अलि जीवबिज्ञान, थोरै प्रकाश ,
लगभग चाहिएको सबै बनाउन सक्छौं ।
यो यस्तो ठाउंहो जहाँ बयस्क र
केटाकेटी संगै खेल्न सक्छन् ।
यो यस्तो कोठा हो जहाँ,
ठुला मान्छेको मद्धतले
सानाको सपना साकार हुन्छ,
अनि प्रौढ फेरी केटाकेटी बन्न सक्छन् ।
बिद्यार्थी: फटाफट है फटाफट !
सेसर हरदा: हामी प्रश्न गर्दै छौं, जस्तै:
नवीकरणीय ऊर्जाले भविष्यको
यातायातको आविष्कार गर्न सक्छौं ?
एउटा उदाहरण ।
अथवा, हामी बृद्धहरुको यातायातको लागि
साधारण व्हीलचेयरलाइ इलेक्ट्रिकमा
रुपान्तरण गर्न सक्छौं ?
प्लास्टिक, पेट्रोलियम, विकिरण आदि
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छन्,
हामी त्यो भन्दा अझ हानिकारक कुरा
सिकाउदै छौं - झुठ ।
हामी डरलाग्दो सत्यबाट केटाकेटीहरुलाई
लामो समय टाढा राख्न सक्दैनौं ।
यी समस्याको समाधान उनीहरुको
कल्पनाबाटनै सम्भव छ ।
तसर्थ बैज्ञानिक, निर्माता, परिकल्पनाकार,
हामीले अर्को पुस्ता तयार गर्नुपर्छ,
जसले हामी, हाम्रो बाताबरणको
हेरचाह गर्नको साथै
बास्तविकरुपमै केहि काम गरेर देखाउन सकुन्
सेसर हरदा: म कसरी केटाकेटीहरुलाई बिज्ञानप्रतिको मोह जगाउछु | TED Talk | TED.com